High Quality Pulse ကောက်ခံရေး
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > High Quality Pulse ကောက်ခံရေး(16 များအတွက်စုစုပေါင်း High Quality Pulse ကောက်ခံရေး ထုတ်ကုန်များ)
High Quality Pulse ကောက်ခံရေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ High Quality Pulse ကောက်ခံရေး ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား High Quality Pulse ကောက်ခံရေး / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် High Quality Pulse ကောက်ခံရေး များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
ဓာတ်ငွေ့ box ကို Pulse မြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ကောက်ခံရေး , Air ကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းအမျိုးအစား Pulse-ဂျက် Bag Filter ကို , High Quality Pulse ကောက်ခံရေး
PPC လေကြောင်း box ကို type ကိုသွေးခုန်နှုန်းအထည်အိတ် filter ကိုထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်: PPC လေကြောင်း box ကိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ 33 မျိုးစုစုပေါင်းစီအခန်းထဲမှာ 32, 64, 96, 128, အိတ်ရှိပါတယ်, ဖုန်မှုန့်အိတ်အရှည်၏လေးမျိုး...
tag ကို: မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , Hot ရောင်းရန်နှင့်အတူမြေမှုန့်ကောက်ခံရေး , High Quality ဆိုင်ကလုန်းကောက်ခံရေး
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover အသေးစိတ်ကို: CLTA ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသုံးပိုင်းတစ်ဘွေဆလင်ဒါတစ်ဦးကောက်ခံရေးပုံးနှင့်တစ်ဦး volute (သို့မဟုတ်လေတိုက်ဦးထုပ်) ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဆလင်ဒါ၏အရေအတွက်အတိုင်း,...
စက်စုဆောင်း high ထိရောက်မှုမီးဖိုထဲမြေမှုန့်
tag ကို: ခြှဖုန်ကောက်ခံရေး , သန့်စင်ပြီးအရည်ကျိုမီးဖိုအတွက် Deduster ၏ကိုးကား , သန့်စင်အရည်ကျိုမီးဖို Deduster
သန့်စင်မီးဖိုထဲဖုန်မှုန့် remover များအတွက် Flue ဓာတ်ငွေ့အစီအစဉ် 1, သန့်စင်မီးဖို၏ deduster ၏ flue ဓာတ်ငွေ့ဖမ်းယူဖုံး၏ဖွဲ့စည်းမှု: ခေါင်မိုး smokestack + အနိမ့်ခုခံရေး, ကြီးမားတဲ့စီးဆင်းမှုပိုက် + စံဥတုတွေ့ဆုံရန်မူကြမ်းပန်ကာ + မီးဖိုထဲကသွေးဆောင်...
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန INSERT Bag Pulse ဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
tag ကို: flat Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ , hot ရောင်းအထည်အလိပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး
operating နိယာမ: သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုလည်း filter ကို separator အဖြစ်လူသိများခြောက်သွေ့သောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါသည်, ကဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ၏ဓါတ်ငွေ့အစိုင်အခဲမှုန်ထဲမှာဖုန်မှုန့်ကိုဖမ်းယူဖို့ဖိုင်ဘာဇာထိုးအိတ် filter...
tag ကို: စက်စုဆောင်းခြင်းစက်မှုဇုန်ပိတ်စ Bag , စက်မှု Bag စုဆောင်းခြင်းစက် , စက်မှုအထက်တန်းအသုံး Bag ကောက်ခံရေး
သွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ 1, သွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း  အုပ်စုခွဲအခန်းထဲမှာ Pulse ကိုအသုံးပြုသည်သမရိုးကျသွေးခုန်နှုန်း duster များ၏ချို့ယွင်းချက်များနှင့်အခနျးကျော duster...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Pulse ဂျက်စုဆောင်း
tag ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဂျက်ဖုန်ကောက်ခံရေး , လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးစက်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး , Pulse ဂျက်ကောက်ခံရေး
အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ပြာရေပုံး (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်အနိမ့်ပွင့်လင်းအနားကွပ်) အားဖြင့်စစ်ထုတ်အခန်းထဲကထဲသို့ဝင်သဖြင့်, ကြမ်းမှုန်ပြာ Hopper တွေလည်းဒါမှမဟုတ်ပြာဘင်သို့တိုက်ရိုက်ကျလိမ့်မည်။ မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ filter...
သဲပေါက်ကွဲမှုသည် Downflow ဖုန်ကောက်ခံရေး
ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုး & Delivery ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်နျ Standard ပို့ကုန်ထုပ်ပိုး: filter ကိုကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ဝတ်လစ်စလစ်ထုပ်ပိုးအတွက်လက်ခံရရှိသိုက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအလွှာ filter ကိုအိတ်များအတွက်စက္ဏူထူထုပ်ပိုး, စသည်တို့ Delivery အချိန်ကာကှယျများအတွက်လိုအပ်သောက
tag ကို: ဒေါင်လိုက်သည့်အရာတစ်ခုဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထည်အလိပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , သဲပေါက်ကွဲမှုချွေဖုန်စုဆောင်းခြင်းစက်
သဲပေါက်ကွဲမှု ROOM တွင်များအတွက် Downflow ဖုန်ကောက်ခံရေး
tag ကို: Downflow ဖုန်ကောက်ခံရေး , သဲပေါက်ကွဲမှုသည်မြေမှုန့်ကောက်ခံရေး
စက်မှုဇုန်စျေး Filter ကိုအိတ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖုန်ကောက်ခံရေး
tag ကို: စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter , High Quality ဖုန်ကောက်ခံရေး
အိတ် filter ကိုမှုတ်ပြန် Pulse အိတ် filter ကိုမှုတ်ပြန် Pulse အနေနဲ့အဆင့်မြင့်နှင့်ထိရောက်သောအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့လေကြောင်းအသံအတိုးအကျယ်,...
စက်မှု PPS က Non-ယက်ဖုန်ကောက်ခံရေး Air ကို Filter ကို Bag
tag ကို: ကျီတစ်ခုဖုန် P84 Filter ကိုအိတ်စုဆောင်းခြင်း , Air ကို NOMEX ဘိလပ်မြေဖုန် Filter ကို Bag , ဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက် Air ကို Filter ကို Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ စက်မှု PPS က Non-ယက်ဖုန်ကောက်ခံရေး Air ကို Filter ကို
စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက် compound အပူကိုခံနိုင်ရည် FMS Baghouse Filter ကိုအိတ်
tag ကို: ရေစိုခံ FMS ဖုန် Bag Filter , ဖန်မျှင်ထည် Filter ကို Bag , ဘိလပ်မြေ polyester စက်ရုံ၏အိတ် Filter
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ အားသာချက်များ 1. ဈေးကွက်ထဲမှာတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖိုင်ဘာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ခေတ်မီတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်သုံးစက်ကိရိယာများ, ငါတို့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး,...
tag ကို: PPS Filter ကို Bag , ဘွိုင်လာဖုန် Filter ကို Bag , ဘိလပ်မြေဖုန် Filter ကို Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ တရုတ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ PPS အိတ်ဖုန်မှုန့် filter...
စက်စုဆောင်း high ထိရောက်မှုမီးဖိုထဲမြေမှုန့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန INSERT Bag Pulse ဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Pulse ဂျက်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သဲပေါက်ကွဲမှုသည် Downflow ဖုန်ကောက်ခံရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သဲပေါက်ကွဲမှု ROOM တွင်များအတွက် Downflow ဖုန်ကောက်ခံရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဇုန်စျေး Filter ကိုအိတ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖုန်ကောက်ခံရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု PPS က Non-ယက်ဖုန်ကောက်ခံရေး Air ကို Filter ကို Bag အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက် compound အပူကိုခံနိုင်ရည် FMS Baghouse Filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale High Quality Pulse ကောက်ခံရေး from China, Need to find cheap High Quality Pulse ကောက်ခံရေး as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on High Quality Pulse ကောက်ခံရေး produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our High Quality Pulse ကောက်ခံရေး, We'll reply you in fastest.
လေထု box ကိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ